पानीले धेरै तिर्खा मात्र मेटिदैन, स्वस्थ्य पनि भईन्छ – Sadarline
नेपालगञ्जमा सोमबारदेखि आन्दोलन चर्काउदै तरुण दल
प्रदेश सरकार अधिकारविहीन नभएको मुख्यमन्त्री पोख्रेलको दाबी
लागुऔषध मुद्दामा फरार दुई पक्राउ
‘नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा बेच्ने सहमति’
नेपालगन्जको डुवान (फोटो फीचर)
डिजाईनका लुगा तयार गर्दै बुटिक
डा. थापा र नरेश श्रेष्ठ प्रवल जनसेवा श्रीबाट सम्मानित
जानकीमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच निशुल्क शिविर सम्पन्न
पत्रकार महासंघ बाँकेले एम्बुलेन्स किन्ने
पानीले धेरै तिर्खा मात्र मेटिदैन, स्वस्थ्य पनि भईन्छ
२३ बैशाख २०७५, आईतवार १३:३५
२३ बैशाख, नेपालगन्ज : पेट भरिएको होस् वा खाली, जुनसुकै समयमा पनि पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हो । पानीले तिर्खा मेट्ने मात्र होइन, यसको नियमित सेवनले सम्भावित कैयौं रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ । पानी कुनै रोगको उपचार नभए पनि यसले पेटको सफाइ गर्ने काम गर्छ ।
मानिसलाई लाग्ने अधिकांश रोगको घर पेट नै हो । बिहान उठेर खाली पेटमा पानी पिउँदा स्वास्थ्यका लागि अझ बढी फाइदाजनक हुने जनरल फिजिसियन डाक्टर मनोज यादव भन्छन् । पानी शरीरका लागि अत्यावश्यक पेय पदार्थ हो । विभिन्न खाद्यपदार्थबाट पनि पानीको मात्रा पाइन्छ । तर, यतिले मात्र शरीरका लागि पानी पर्याप्त हु“दैन ।
हाम्रो शरीरको ७० प्रतिशत अंग पानीले बनेको हुन्छ । पानी धेरै उद्धेश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ । खाना पकाउने, कपडा धुने, नुहाउने सबै कामका लागि पानीको आवश्यकता पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पिउने पानीको हो । सामान्य व्यक्तिले (पुरूष या महिला) दिनमा दुई देखि तीन लिटर पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । तर यो एकै चोटी पिउनु हु“दैन । यसको लागि यही समय भन्ने पनि छैन। पिसाब पहेले हुनु हु“दैन । पिसाब पहेलो छैन भने शरीरमा पानीको मात्रा कमी छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यदी तिर्खा लागिहाल्यो भने तिर्खा मेट्नुपर्छ । यसको मतलब यो होइनकि तिर्खा लाग्नासाथ १ लिटर,२ लिटर पानी खाइहाल्नुपर्छ । धेरै पानी एकैचोटी पिएमा बमिट हुन सक्छ। पेट फुले जस्तो हुन्छ शरीरलाई असहज हुन्छ ।
दिनमा यति पानी पिउने भनेर कुनै नियम छैन । मानिसको शारीरिक बनावटअनुसार पानीको आवश्यकता पर्छ । सामान्यतया प्यास लाग्दा पानी पिउने गरिन्छ । मानसिक थकान वा तनाव हु“दा पनि छिनछिनमा पानी पिउने गर्छन् । तर, यतिले मात्र शरीरमा पानीको मात्रा पुग्दैन । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले गरेको एक अध्ययनले युवा अवस्थामा पुरुषलाई प्रतिदिन तीन र महिलालाई दुई दशमलव दुई लिटर पानी पिउनुपर्ने बताएको छ । धेरै गर्मी छ शरीरमा पसीना आएको छ अथवा काम गरिएको छ भने पानीको मात्रा बढाउनुपर्ने पनि हुन्छ ।
सिद्धेश्वर उमावि स्वर्ण जयन्ती : मुख्यमन्त्रीद्धारा सम्बोधन
सदरलाइनडटकम २३ बैशाख, नेपालगन्ज : प्रदेश नं. ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले विकास र समृद्धिका लागि संकल्प गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले विकास र समृद्धिका लागि सपना देख्न र आफ्ना व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आग्रह गरे । बा“केको राप्तीपारी स्थित सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई आईतबार सम्बोधन गर्दै […]
१६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १९:५९
घाइते खडकालाई कठामाण्डौ लगियो, कोपाईलटको अवस्था गम्भीर
१ माघ २०७६, बुधबार १६:५७
माघे संक्रान्ति हर्षोल्लासका साथ मनाईंदै
२४ माघ २०७७, शनिबार १९:२२
नेपाल मुद्रण उद्योग संघ बाँकेमा पौडेल
३० कार्तिक २०७६, शनिबार १८:३७
महामारी फैलन नदिन बहु समन्वात्मक दुई दिने कार्यशाला
१५ बैशाख २०७७, सोमबार १३:२४
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु
२३ पुष २०७३, शनिबार १३:०८
मारवाडी यूवा मञ्चद्वारा रक्तदान
कोरोनाबाट भेरी अस्पतालमा एक महिलाको मृत्यु